PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - IMIPHAKATHI IZOHLUPHEKA UMA
IMIPHAKATHI IZOHLUPHEKA UMA
KUXOSHWA ABANGCWABI BEZINKAMPANI ZABELUNGU NAMANDIYA Okwesibili, indlela yebhizinisi ye AVBOB ihlelwe ngendlela yokusimamisa osomabhizinisi babantu abamnyama ngokubahlinzeka ngengqala-sizinda, amasu nokuqeqeshwa. Lokhu kwenza bakwazi ukuvula futhi baseben
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Ezikaqedisizungu -
Uma bekuya ngokuka Mnu Nkosentsha
Shezi, Unobhala Jikelele wenational Funeral Practitioners Association of South Africa (I-NAFUPA SA) , bekungeke kwavunyelwa noma yiyiphi inkampani yokungcwaba yabelungu noma yamandiya ukuba ingcwabe ezindaweni zabantu Abamnyama ukusukela lulunye kufebruary kuqhubeke.
I-AVBOB ithathwa njengen ye yezinkampani “zabelungu” okubhekisel we kuzona ngalezi zinkulumo zobudedengu zika Mnu Shezi, ngakho sifisa ukuphendula ngalendlela elandelayo: Okokuqala nje, sikholelwa wukuthi indlela umnu Shezi nenhlangano yakhe abachaza ngayo lesi simo ayigcini ngokukha phezulu okuyingozi, kodwa igcina ngokungavezi okuyikona khona emikhakheni eminingi. Lokhu akuyi kugcina ngokuqeda inkululeko yokukhetha kubathengi kodwa, uma lesi senzo esingekho emthethweni singamiswa, sizobangela imiphumela eyingozi kakhulu kwezomnotho kokubili ezingeni eliphansi nakwelikhulu. Amaqiniso yilawa alandelayo:
I-AVBOB iyinkampani eyi “mutual society” okusho ukuthi ingeyomphakathi, lokho kuchaza ukuthi ayinabo abanikazi bamasheya abamukela izabelo. Abanikazi bale Nhlangano ngabanikazi bamapholisi, u-80% wabo ongabantu Abamnyama, futhi labanikazi bamapholisi bahlomula ngokuqondile empumelelweni yenkampani ngokwabelwa izingxenye kwinzuzo eyengeziwe. Eminyakeni eyisishiyagalolunye eyedlule,
I-AVBOB yabele abanikazi bamapholisi ayo (okuyibona banikazi benkampani) inzuzo eyengeziwe engu R8 billion ngendlela yokunikezwa amabhonasi akhethekile kanye nezinzuzo zokungcwaba zamahhala, ngaphezu kwamanani amapholisi abo. Lezi zinzuzo eziyingqopha-mlando beziyolahleka uma abanikazi bamapholisi bebiza imali kumapholisi abo noma bawamise bese belandela indlela ye NAFUPA SA. Ukuzibophezela kwe AVBOB ekuthuthukiseni imiphakathi entulayo akupheleli ezingeni losomabhizinisi nelabantu ngabanye. Iqhaza lethu esilibambe ekutshaleni imali emphakathini (I-CSI) liyabonakala. I-AVBOB isanda kumemezela omunye umsebenzi ozoba yingqala-butho kwizinkampani ezitshala Imali Emphakathini lapha eningizimu Afrika. Umsebenzi wokulungisa izingqala-sizinda ezikoleni, lapho I-AVBOB izotshala imali engu R150 million wokuthuthukisa izikole ezisemaphandleni nasezindaweni ezintulayo kuzo zonke izifunda eziyisishiyagalolunye, owamenyezelwa ngo 2017. Lomsebenzi ulandela omunye owamakhonteyina angu 50 ayimitapo yezincwadi I-AVBOB eyanikela ngawo ezikoleni ezikulezi zindawo kusukela ngo 2014. Ngaphandle kwalemisebenzi yomphakathi,
I-AVBOB ihlala isiza imiphakathi ehlulekayo ngokwezimali ukwenza umngcwabo, ngokuthi ibangcwabele mahhala noma ibehlisele kakhulu izindleko. Uma ucabangela lokho osekwenziwe yi AVBOB kulemiphakathi emashumini eminyaka, kuyoba yinhlekelele kuwo wonke umuntu, owesilisa owesifazane nezingane, endaweni ngayinye abahlala kuyo kulelizwe uma kuthiwa siyaxoshwa. Sikholelwa wukuthi zimbili izindlela zokufinyelela uguquko lapha eningizimu Afrika: eyokuqala ngeyokuthi kufanele sikwenze ngoba kuyisibopho futhi siphoqelekile. Kanti-ke ikhona nenye indlela, ejulile, enamandla, ebambelele kakhulu ezimisweni ezisemqoka, ezivela enhliziyweni, ukusebenza okunenjongo nokuzimisela. I-AVBOB iqhutshwa yisifiso sokusebenzela abanikazi bamapholisi ethu (okungabanikazi benkampani) kanye nemiphakathi esisebenza kuyo.
I-AVBOB ibambe iqhaza KU-B-BBEE ezingeni lesi 2. Njengomqashi, I-AVBOB izibophezele oguqukweni nasekubeni yinkampani eyisibonelo. Sifuna ukwenza umehluko ophathekayo ezimpilweni zabo bonke abakhele i-ningizimu Afrika. Ekuphetheni, sikholelwa ukuthi umuntu waziwa ngezenzo zakhe, nokuthi ukuzibophezela oguqukweni asikusho ngomlomo kuphela; kepha kuwuthando oluvutha ngaphakathi kulenhlangano. Lokhu kubonakala ngazo zonke izenzo ZE-AVBOB kwinhlala kahle engokomnotho emphakathini nokuthuthukiswa kwabo bonke abase Ningizimu Afrika. Izenzo esezenziwe yilenkampani kuze kube manje – nesazoqhubeka izenza – zihambelana nesiqubulo sethu esithi, “We are here for you” /“Sihlala silungele ukukusiza”.